Ithegi: umnxeba | Martech Zone
Symbl.ai: Iqonga lomphuhlisi lobukrelekrele boNcoko
NgoLwesithathu, Aprili 1, 2020 NgoLwesithathu, Aprili 1, 2020 Douglas Karr
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwishishini ziincoko zalo- zombini iincoko zangaphakathi phakathi kwabasebenzi kunye nengeniso yangaphandle evelisa incoko nabathengi. Isimboli sisuti esibanzi se-API esihlalutya incoko yendalo yabantu. Inika abaphuhlisi amandla okwandisa oku kunxibelelana kunye nokwakha amava omthengi angaqhelekanga nakweliphi na ijelo-nokuba lilizwi, ividiyo okanye umbhalo. Isimboli yakhelwe kubuchwephesha beNgcaciso yoMxholo (i-C2I) yetekhnoloji, evumela abaphuhlisi ukuba badibanise ngokukhawuleza ubukrelekrele obunqabileyo bokuhamba obuhamba
Ngaba Ubusazi Ukuba Kukho "Ukubambelela Ngentengiso"
Ndinyanisekile. Xa uSteve Hashman, uMlawuli, ukuThengisa kunye neMveliso kwi-Exonential Solutions e-CUBE, wandibhalela nge-infographic pitch malunga ne-On Hold Marketing, ndicinga ukuba ndandiqhula ndikhwaza, Uyandibhanxa?. Kodwa, njengaye nawuphi na umthengisi olungileyo, uSteve wenza umsebenzi wakhe wasekhaya kwaye wahlanganisa i-infographic eyenza ithuba licace kakhulu. Iipesenti ezingama-70 zabatsalela umnxeba zibanjiwe. I-60% yabo iya kuxhonywa
Musa ukuwela “kubukho beNgingqi” inkohliso
NgoLwesihlanu, Meyi 2, 2014 NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, 2014 Douglas Karr
Ifowuni yam ikhala imini yonke. Amaxesha amaninzi ndihlala ezintlanganisweni nabaxumi kodwa ngamanye amaxesha ndihleli ndivule idesika yam ngelixa ndisenza umsebenzi. Xa kukhala umnxeba, ndijonga ngaphezulu kwaye kuhlala kukho ikhowudi yendawo engama-317 ecofa kuyo. Nangona kunjalo, inombolo ayikho kubafowunelwa bam ukuze ndingaboni ukuba ngubani kanye kanye onditsalelayo. Ndinabantu abangaphezulu kwama-4,000 abafowunelwa kwifowuni yam-ehambelanayo ne-LinkedIn kunye ne-Evercontact…